'Resident Evil 2' Remake Inogashira E3 Ngoro uye Kuburitswa Zuva! - iHorror
musha Video Games 'Resident Evil 2' Remake Inogashira E3 Ngoro uye Kuburitswa Zuva!
'Resident Evil 2' Remake Inogashira E3 Ngoro uye Kuburitswa Zuva!
yakanyorwa na Eric Panico June 12, 2018
Mutambo we Playstation E3 musangano wacho wakangoburitsa remake yakamirirwa kwenguva refu yegore ra1998 yekupona kwekutya kutyisa Mugari Evil 2! Gore rakapera Mugari Evil 7 kwaive kudzoka kune iyo franchise's inotyisa midzi, mushure mekunge mitambo yakazotevera yatanga kuzendamira zvakanyanya pazviito uye nekukurumidza-nguva zviitiko. Iye zvino Capcom iri kutidzosera pakutanga kwekuparara.
Mugari Evil 2 muenzaniso wequintessential wekutya-kukurudzira, mamiriro emuchadenga mutambo wekutengesa wakavakirwa, uye mumwe wemitambo yakanakisa mune akateedzana. Yokutanga mugari Zvakaipa akagamuchira rakabudirira HD remaster kumashure muna 2002, uye mafeni vakashamisika kubvira riini Mugari Evil 2 vaizorapwa zvakafanana.
Zvakanaka, iyo yekumirira yapera.
Iyo turera inovhura kubva pakuona kwekuda kuziva apo isu tinokambaira tichitevedza masherufu, uye tichiona mupurisa achipinda mukukonana neasingaonekwe kufungirwa. Sezvo pasherefu yataive takanamirwa pamazano pamusoro, zvinoratidza kuti isu taipupurira izvi zvichiitika kuburikidza nemeso eiyo (ikozvino yakapwanyika) mbeva. Mupurisa anowira mukuwonekera, sezvo mhondi inonyudza meno mumutsipa wemupurisa ichibvarura chimedu chihombe chenyama.
Pfuti inorira kunze, uye iyo zombie inodonha isina hupenyu (senge, kufa chaiko) pasi se rookie Leon Kennedy anoonekwa akamira achizunguzwa pamusuwo neako anopfungaira parutivi. Turera inozotirova necacophony ye grunge, mhere, uye neropa sinew.
Capcom yakamisidzira kutyisa kusvika pagumi nemana sezvo toni yetrailer yaenda nerima zvakanyanya uye zvakanyanya (zvakanyanya mundiro imwechete se Mugari Evil 7). Isu tinoonawo ane moyo murefu Claire Redfield achimuita kudzoka kwekukunda.
Raccoon Guta harina kumbobvira zvazivikanwa zvinoshamisa patinocheka kubva mumigwagwa yakasiyiwa, inonaya mvura, kune inotyisa, ine ropa rakazara-mukati. Iyo turera inozvirumbidza ine simba, inotyisa mwenje, uye zvinoratidzika zvisina tariro kuona, ine inoshamisa hunhu mamodheru. Mota dziri kubvira, zombies dzinopunzika dzakatenderedza kona dzese, uye tinotomboona zvimwe zvezvinosemesa zvaivhundutsa hope dzedu dzemaroto. Zombies, uye Lickers, uye Vadzvanyiriri… maiwe zvangu.
GameSpot inoshuma kuburitswa kwenhau kunosimbisa mutambo wemutambo watendeuka kubva Kugara Zvakaipa 7's wekutanga-munhu POV kune wechitatu-munhu pamusoro pefudzi. Nekudaro, iyo Gameplay inoita kunge nehungwaru ichichengeta kutarisa kwayo kune zvinokambaira zvinotyisa zvinopesana nekukurumidza-kuita chiito. Zombies dzinonzi zvakare dzinotora "pakarepo inoonekwa kukuvara" mune chaiyo-nguva.
Nekutenda, mafeni haafanire kumirira akareba kuti vafambe Raccoon City's zombie yakazadza migwagwa zvakare. Turera inopera ichisimbisa kuburitswa musi waJanuary 25th, 2019. -Pamberi-mirairo yave kuwanikwa kutenga mutambo pa Playstation 4, Xbox One, uye PC.
Chinhu chimwe ndechechokwadi… izwi rekuita rakanyatsoita nani.
Tarisa tarisa pano chaipo:
Iwe unofungei nezve turera?! Iwe unofara kudzokera kuRaccoon City? Tumira pfungwa dzako mune zvakataurwa!
Biohazardbiohazard 2CapcomE3mugari Zvakaiparesident zvakaipa 2
'Nhaka' Ndiko Kuvhurwa Kukuru KweA24 Kwese paBhokisi Hofisi
'Rufu Rwakamira' E3 Trailer Wows Nayo Yakatwasuka kumusoro Weirdness
'Resident Evil Village's' Nyowani Trailer Inofumura Zvimwe Zvakavanzika
Dino Shooter 'Yechipiri Kutsakatika' kuri Kuuya muna Kubvumbi
'Resident Evil Re: Verse' Vhura Beta Inouya Ino Kubvumbi
'Stubbs Iyo Zombie: Mumupanduki Pasina Pulse' ...
'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge' Inotitora ...
'Vatorwa: Fireteam' Trailer Inokanda Iwe neako Co-Op ...
Iyo Xenomorph Inoonekwa Seiri Kudonhedza mu 'Fortnite' ...
'Diablo 2' Trailer Inodzikisira Iyo Inonakidza Remake Iyo ...
'Kudanwa kweDuty Zombies' Inowana Yakazara Kuvhura Nyika ...
Bhurawuza Cateories Select Category Amazon (bhaisikopo) (7) Amazon (dzakateerana) (8) AppleTV + (1) Blu mahara (3) Comedy Horror (46) Comics (11) Facebook (akateedzana) (1) Ngano (30) Yakawanikwa Footage (26) Gore (23) HBO (mafirimu) (4) HBO (dzakateerana) (7) Horror Mabhuku (42) Horror Varaidzo Nhau (10,383) Anotyisa Mafirimu (155) Zvinotyisa Series (46) Zvinotyisa Subgenres (8) Hulu (akateedzana) (4) Bvunzurudzo (bhaisikopo) (31) Nhaurirano (dzakateerana) (2) LGBTQ Inotyisa (29) Lists (mafirimu) (35) Lists (akateedzana) (2) Pamusika (19) Monster Horror (9) Wongororo dzeMovie (37) Mafirimu (11) Mumhanzi (32) Netflix (bhaisikopo) (12) Netflix (akateedzana) (20) Kwete-Ngano (3) Zvakaenzana (75) Psychological Horror (zvinonakidza) (52) Series Ongororo (5) Kubvunda (bhaisikopo) (38) Kubvunda (dzakateerana) (13) Slasher (4) Shamisa uye Zvisingawanzo (35) Kutenderera Mafirimu (45) Kuratidzira Series (15) Zvidhori (2) Ngoro (firimu) (115) Ngoro (dzakateedzana) (31) Mhosva Yechokwadi (41) Vhidhiyo Mitambo (163) YouTube (bhaisikopo) (3) YouTube (akateedzana) (11)
'Bvudzi Rakashata' Director Justin Simien muTalks for ...